काठमाडौंबाट बुलेट बाइकमा भुटुङटुङ फोक्सुन्डो यात्रा – Dullu Khabar
by रमेश कार्की (सेटाेपाटी)
२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार १२:०५
साथीहरू लद्दाख लागे। मलाई भने लागिरहेको थियो – कुनै राइड त गर्नैपर्छ। अनि यसअघि पनि धेरै समय डोल्पाको फोक्सुडो राइडको विषयमा चर्चा भइनैरहेको थियो। हाम्रो टिममा अनि लाग्यो डोल्पा राइड किन नगर्ने त?
उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो – तपाईंहरू पत्रकार पनि हुनुहुन्छ रे। यो कुरा केन्द्रसम्म पुर्‍याइदिनुहोस् है। अनि कार्यक्रम सकेर त्रिपुराकोटमा पुगेपछि बाला त्रिपुरा सुन्दरीको दर्शन नगर्ने भन्ने कुरै भएन। अनि लाग्यौं मन्दिरतर्फ। धेरै पहिलेदेखि सुनेको देवीको बारेका आज प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाउँदा मन निकै आनन्दित भइरहेको थियो।
बिहान १२ बजे त छेप्का पुगियो। लगभग छ घण्टा हिँडिएछ। थाकिएछ पनि। छेप्कामा खाना पाकिनसकेकाले आराम गर्न समय मिल्यो र केही बेरपछि खाना पाक्यो। खानामा अचार साह्रै मीठो रहेछ सोध्न। मन लाग्यो के-को अचार भनेर? अनि त अचार त त्यहीँ आउँदा बाटोमा भेटिएको गाँजाको रहेछ। पहिले नखाएको भएर होला निकै मीठो र नौलो टेष्ट लाग्यो। २ बजेतिर बाटो लागियो। आजको बसाइ से–फोक्सुन्डो गाउँपालिका–८ मा रहेको सम्झना गेष्ट हाउसमा तय गरिएको थियो। फोक्सुडोबाट बगेर आएको खोलाको तिरैतिर अनि हरियो जंगल। त्यसमा पनि बेला-बेलामा साँघुरो बाटोमा खच्चड आउँदा लडाइदेला कि भन्ने डर भने आफ्नै ठाउँमा छँदैछ। बाटोमा थकाइ मार्ने क्रममा फोक्सुडो खोलाको पानी त यति धेरै खाइयो कुरै नगरम्। सारै मीठो चिसो पानी अनि त्यो चिसो पानी खोलाबाट उगाएर ल्याउने काम भने भाइ निर्माण देवकोटाले राम्रोसँग गरे। भन्थे बेला-बेलामा – दाजु पानी त साह्रै चिसो उगाउनै गाह्रो।
धेरैचोटि फोक्सुडो खोला तर्न पर्नै रहेछ। खोलामा आधुनिक पुल भन्दा पनि स्थानीय स्रोतसाधनबाट बनेको काठको पुल रहेछ। पुलको डिजाइन गुणस्तरको हिसाबले मलाई चाहिँ मन पर्‍यो। रात पर्न लागिसकेको थियो। होटल पुग्न अझै धेरै बाटो बाँकी नै थियो। अब चाहिँ थाक्न लागिएछ। पाइला लम्काउनु पर्ने हो। तर, दिनभरको हिँडाइले लामो पाइला गर्न सकिएको थिएन। दिउँसो हिँड्दा त अलि सफा ठाउँ। छानेर सफा गरेर बसिन्थ्यो। धेरै थाकेर होला बसौं जस्तो लाग्यो भने बसिहाल्ने। थकाइ मार्न पाए पुगि हाल्यो। करीब बेलुकीको ८ बजिसकेको थियो। पूरै अन्धकार थियो। केहीबेर बसौं भन्ने कुरा भयो। अनि त यसो सबै जना बसेकै ठाउँमा ढल्किएछौं। हामी त त्यहीँ बसेकै ठाउँमा निदाएछौं। हातमा टर्च लाइट थियो। भुइँमा टर्च खस्दा पो बिउँझिएँछु। अनि हेर्दा पूरै अन्धकार छ। त्यसमा फोक्सुन्डो खोलाको एकनासले सुसाइरहेको। अनि मनमा लाग्यो – मीठो निद्राको लागि भव्य महल र लगजरी बेड हैन, त्यसका लागि त केवल आफूले गरेको काममा आत्मसन्तुष्टि हुन पर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो।
अब भने मनमा ठूलै राहत मिलेको थियो। किनकि, हामी हिँड्ने बानी नपरेकालाई अघिल्लो दिन करीब १४ घण्टा, अनि आज करीब ४ घण्टाको हिँडाइले ज्यान थाकेको महसुस भइरहेको थियो। रिग्म गाउँको सुरुवातमै एउटा पसल रहेछ। जहाँ चिया खाजा लगायतका समान पाइने रहेछ। निर्माण भाइ र म भने अरु साथीहरू भन्दा अलि अगाडि नै भएकाले केहीबेर आराम गर्दै चिया खानतिर लागियो। त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो – ताल त आइ हाल्यो नि गाउँको पछाडि त हो ५ मिनेटमा पुग्नु हुन्छ। अनि साथीहरू अलि पछाडि नै भएकाले हामीलाई मनले मानेन। लगियो तालतर्फ।
नेपालमा यस्ता थुप्रै सुन्दर ठाउँहरू छन्। तर प्रचारप्रसारको अभावले त्यस्ता सुन्दर पर्यटकीयस्थलहरू ओझेलमा परेका छन्। सरकारीस्तरबाटै सुन्दरतालाई विकास अनि पर्यटनको लागि प्रचार-प्रसार भएमा यो सुन्दरभूमिमा सुनको जलप लगाएसरह हुने थियो। सेटाेपाटीबाट साभार